Tokinao | Janoary 2007
fanomezan'endrika ireo hafatra
Ireto misy teknika fanomezan'endrika ( fanaovana "mise en forme" ) ny hevitra ato amin’ny blaogy :
- Teny tianao hatevina :
Raha misy teny tianao hatevina ( “bold script” na “caractère gras” ) dia ataovy ao anatin’ireto balizy roa ireto : Rehefa tafapetraka moa ny hafatrao dia toy izao no hiseho : soratra tiana hatevina.
- Teny misompirana :
Raha misy teny tianao hisompirana ( “italic script” na “caractère en italic” ) dia ataovy ao anatin’ireto balizy roa ireto : . Rehefa tafapetraka moa ny hafatrao dia toy izao no hiseho : soratra tiana hisompirana.
- Fomba fidìnana andàlana :
Raha te-hidina an-dàlana moa dia soraty ny hoe .
- Raha te-hametraka rohy ianao :
Raha te hametraka rohy ianao amin'ny alalan'ny fanindriana teny iray dia manorata toy izao : . Ataovy eo amin’ny toeran’ny “www.rohy.com” ilay rohy tianao handehanan’ny mpanao aterineto ; ary ataovy eo amin’ny toeran’ilay hoe “tsindrio eto” ny teny tianao ho hita sy afaka tsindrin’ny mpanao aterineto.
Ireo aloha no hitako fa azo ampiharina eto amin’ny blaogy. Fa raha mahita teknika hafa ianao dia isaorana mialoha mampahalala izany antsika. Raha sanatria ka misy tsy fihetezana kosa ireto nolazaiko ireo dia lazao anay koa .
# Posted by tokinao :: Resaka mandalo:: Hametraka hevitra (18) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)